I-XIKOO air cooler ihlanzekile futhi iyanakekelwa
Njengoba ukuqwashisa kwabantu ngezeMvelo kukhula kule minyaka, umoya opholile onobungani bendawo uthandwa kakhulu ehlobo elishisayo. Inganciphisa izinga lokushisa lomoya omusha ongaphandle ngokusebenzisa amanzi aphuphumayo kuphedi yokupholisa. Bese uletha umoya opholile nopholile endlini. XIKOO waqala ukuthuthukisa futhi akhiqize di ...
Izinhlobo nokucaciswa kwamapayipi omoya embonini yomoya opholile
Kunezinhlobo eziningi zamapayipi okuhambisa umoya embonini yomoya epholile yezimboni, esetshenziswa ezindaweni ezahlukahlukene futhi edinga izinto ezihlukile, nezinto ezisetshenziswayo nazo zehlukile. Namuhla, i-XIKOO air cooler izokwethula ngokuningiliziwe izinhlobo nezincazelo ze-air supply duc ...
Ukubaluleka kokufakwa okupholile komoya embonini
Okokuqala, ake siqale siqonde imboni evaporative air cooler. Isimiso esisebenzayo semboni evaporative air cooler yehlukile kwi-air conditioner ejwayelekile. Isebenzisa amanzi angaphansi komhlaba njengokujikeleza ukufeza injongo yokupholisa. Ngokuvamile, izinga lokushisa lamanzi cishe ...
Umkhosi ojabulisayo wasekwindla ophakathi nendawo
Njalo ikhalenda yenyanga ka-Agasti 15 ngumkhosi wendabuko waseChina Mid-autumn festival .Lolu suku lungoSepthemba 21 kulo nyaka. Wonke amaShayina anamaholide asemthethweni ezinsuku ezi-3 kusuka ngoSepthemba 19 kuya ku-21. Umkhosi waphakathi nekwindla uwumkhosi wendabuko obaluleke kakhulu kuwo wonke amaShayina, ngaphandle kwentwasahlobo ...
Inganciphisa mangaki i-XIKOO EVAPORATIVE AIR COOLER ene-chiller?
Ngaphansi kwezimo ezijwayelekile, izinga lokupholisa lokuvikelwa kwemvelo kwezemvelo lingama-4-10 degrees, kuya ngezimo zezulu. Umphumela wangempela wokupholisa uhlobene nokushisa nomswakama wosuku. Ukuphakama kwamazinga okushisa kanye nomswakama ophansi, i-obvio eyengeziwe ...
I-XIKOO EVAPORATIVE AIR COOLER ye-Internet Bar Ventilation ne-Cooling Solution
Kulezi zinsuku, ngaphezu kwezidingo zokulungiswa kwamakhompiyutha, abantu banaka kakhulu izidingo zezemvelo. Uma amakhefi we-Intanethi engenawo umoya, iphunga lisinda, futhi namazinga okushisa aphezulu, kuzokuthinta kakhulu ukusebenza kwe-Intanethi ...
Ungabala kanjani ukuthi zingaki izimboni ezipholisa umoya ezidingekayo ku-workshop
Ungabala kanjani ukuthi zingaki izimboni ezipholisa umoya ezidingekayo ku-workshop. Ngokuthuthukiswa kobuchwepheshe bokonga amandla nokonga imvelo, amafektri amaningi nezindawo zokusebenzela bazikhetha njengemishini yokungenisa umoya nokupholisa kwabasebenzi. Abantu abaningi bathi bangaki ...
Kungani umoya opholile okhuphukayo uba nephunga elikhethekile?
Ihlobo elishisayo liza, futhi umoya opholile wokuvikela imvelo opholile kanye nokuvikelwa kwemvelo opholile emafemini amakhulu, kumasifundisane nasezitolo ezinkulu kufanele uphinde ube matasa. Ngasikhathi sinye, abantu abaningi babike ukuthi umoya opholile opholile ngamanzi unephunga elikhethekile. Wh ...
Ungayikhetha kanjani indawo yokufaka umoya opholile wezimboni
Ngokuthola indawo yokupholisa umoya opholile wezimboni, ingahle ihlobane nekhwalithi yomoya opholile opholile womoya kanye nokuqabuleka kwendawo epholile yomoya. Kufanele sikhethe kanjani isikhundla sokufaka somoya opholile? uma ungakuqondanga ...
Ungayihlanza kanjani umoya opholile opholile
Angazi ukuthi wake wahlangabezana yini nesimo lapho umoya ovela endaweni epholayo yomoya unephunga elikhethekile futhi ungabandi. Uma kunenkinga enjalo, kufanele kupholiswe umoya opholile. Ngakho-ke, kufanele ihlanzwe kanjani umoya opholile? 1.Ukuhlanza okupholile komoya: indlela ye-c ...
Ukuhlaziywa kwembangela yomsindo ophakeme womoya opholile
Ngokusetshenziswa komoya opholile ekusetshenzisweni kwamabhizinisi, abathengi abaningi bakhombisa ukuthi umsindo odalwa yi-air-saving air cooler mkhulu kakhulu, osekuyinkinga enkulu ebhekene nale mboni. Okulandelayo, ake sibheke izimbangela nezixazululo zomsindo omkhulu womoya opholile ...
Uhlobo luni lohlelo lokupholisa olulungele isitshalo sefektri?
Izinkampani eziningi zinenkinga yokuthi zingazipholisa kanjani izitshalo, ngoba ngenkathi kuxazululwa ukupholisa kwesitshalo, hhayi kuphela umphumela wokupholisa, kepha nezindleko zokupholisa zidinga ukucatshangelwa. Izakhiwo zefektri ehlobo zigcwele kakhulu, ikakhulukazi ngoba abazi ukuthi yini imishini yokupholisa ...